‘समर्थन फिर्ता लिए त राजीनामा आइहाल्छ नि ! आज मागेको हो र राजीनामा रु माग्या माग्यै छ त ! मागेपिच्छे म कसरी दिन सक्छु राजीनामा ?’, काठमाडौंमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘एक दिन एउटा राजीनामा हुन्छ। एउटाले माग्दैन, दुइटाले माग्दैन। एक दिन माग्दैन, दुई दिन माग्दैन। माग्या माग्यै छ। ए ! बाबा, हटाऊ न त। समर्थन फिर्ता लिइदेऊ भन्छु लिँदैन। समर्थन फिर्ता पनि गर्दैनन् अनि राजीनामा माग्छन्।
‘राष्ट्रिय आवश्यकतासँग अंकगणितले तादात्म्य राखेन। हामीले तादात्म्य राख्न कोसिस गर्‍यौं, भएन। तब ताजा जनादेशमा जानुपथ्र्यो’, ओलीले भने, ‘मेरो विचारमा फेरि ढिलो–चाँडो ताजा जनादेशबाट अहिलेको अंकगणितमा हेरफेर नगरी, अनुकूल अंकगणितबिना देश अगाडि जानै सक्दैन। त्यसकारण फेरि पनि हामी ताजा जनादेशमा जानुपर्ने हुन्छ। देशको विकास र राष्ट्रिय आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्ने खालको अंकगणित निर्माण गर्नुपर्छ।